कहिलेसम्म आउँछ कोरोनाको ‘टीका’ ? मानिसमा १७ ‘भ्याक्सीन’को हुँदैछ परीक्षण – Sanchar Patrika
कहिलेसम्म आउँछ कोरोनाको ‘टीका’ ? मानिसमा १७ ‘भ्याक्सीन’को हुँदैछ परीक्षण
July 4, 2020 221
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) का अनुसार अहिले सारा विश्वमा थोरैमा पनि १४७ सम्भावित कोरोना भाइरसको टीका विकसित भईरहेका छन् ।
भ्याक्सीनमा फन्डिङ दिने मानिस र संस्थाहरुमा विश्वका केहि सरकार पनि सामेल छन् ।
यसमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका, साना तथा ठूला फार्मस्युटिकल कम्पनी र बिल गेट्स र डोली पार्टन जस्ता धनीहरुको नाम छ ।
अहिलेसम्म १७ वटा टीका बनाइएका छन् जो, मानव परीक्षणको स्टेजसम्म पुगेका छन् । १७ मध्ये ७ टीका चीनले विकसित गरिरहेको छ ।
कहिलेसम्म आउँछ टीका ?
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र नयाँ टीका विकसित गर्ने व्यक्ति मोन्सेफ स्लाईले एक भ्याक्सीन यो वर्षको अन्तिमसम्ममा आउने गरेर तयारी थालेको बताएका छन् । तर अधिकांश सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञले यसमा थोरै मात्र समय लाग्ने बताइरहेका छन् ।
यस बारेमा फ्रेन्च नेशनल इन्स्टीट्युट अफ हेल्थ एण्ड रिसर्चका पूर्व निर्देशक र डब्ल्युएचओका एक शिर्ष अधिकारी डा. म्यारी पोल कीनीका अनुसार सन् २०२१ को मध्यमा लाखौँ तथा करोडौँ मानिसका लागि भ्याक्सीन बन्न सक्नेछ ।
त्यस्तै डब्ल्युएचओले कोरोना भाइरसको महामारी कहिल्यै पनि पूर्ण रुपमा नसकिने चेतावनी दिएका छन् । डा. कीनीका अनुसार कोभिड १९ विरुद्धको एक टीका विकसित गर्न सकने बताएका छन् ।
कसरी काम गर्छ क्लीनिकल ट्रायलले ?
विभिन्न कम्पनीहरुले बनाएका भ्याक्सीनका साथै टीकाको पनि परीक्षण गरिएको छ । ति मध्ये केहि यस्ता टीका पनि छन्, जसलाई पहिला कहिल्यै मानिसमा प्रयोगका लागि अनुमति मिलेको थिएन ।
कुनै पनि भ्याक्सीनलाई स्विकृति दिन र व्यापक रुपमा वितरण गर्नु भन्दा पहिला प्री क्लीनकल चरणमा पशु तथा मानिसमा परीक्षण गर्नुपर्दछ । अन्तिममा थोरै संख्यामा मात्र यस्ता परीक्षणबाट भ्याक्सीन सफल हुने गर्दछन् ।
टीका परीक्षणको पहिलो चरण
१. २० देखि लिएर १०० सम्म संक्रमित प्रतिभागीमा औषधिको प्रयोगको प्रभाव कस्तो रहन्छ भनेर जाँच्नका लागि परीक्षण गर्ने गरिन्छ । यसमा केहि महिनाको समय लाग्न सक्छ ।
सयौँ संक्रमितमा टीकाको परीक्षण गरिन्छ । किनभने यो औषधिले काम गर्दछ वा गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्नको लागि र यसको साइड इफेक्टको बारेमा बुझ्नका लागि पनि । यसमा दुई वर्षको समय लाग्न सक्दछ । र एक तिहाई ड्रग्स नै तेश्रो चरणमा पुग्दछन् ।
अत्याधिक महत्वपूर्ण अभ्ययनको रुपमा हेरिने यो चरणमा परीक्षणको लक्ष्यधेरै संक्रमितलाई ठीक बनाउँछ वा बनाउँदैन भन्ने बारेमा अध्ययन गरिन्छ । अध्ययनको व्यापकता र अवधिका कारण तेश्रो चरणको परीक्षण दुष्प्रभावलाई देख्न सकिन्छ । यसको समय लगभग ४ वर्ष लाग्न सक्छ ।
बिरामीहरु रोगसँग लडिरहेको र औषधिको प्रयोगबाट देखिएको प्रभावका बारेमा यस चरणमा अध्ययन गरिन्छ । साथै संक्रमितमा परीक्षण लगातार भईरहन्छ । प्रभावशाली र दीर्घकालीन दुष्प्रभावको बारेमा अध्ययन गरिन्छ ।
एफडीएद्वारा टीकाको अनुमती पाएपछि यसको परीक्षण शुरु हन्छ । केहि मामिलामा कम्पनीहरुले संयक्त रुपमा पहिलो, दोश्रो वा तेश्रो चरण एकैसाथ पनि गर्न सक्छन् ।
यी हुन् १७ भ्याक्सीन
1. AstraZeneca: यूनाइटेड किंगडमको अक्सफोर्ड यूनिभर्सिटीको भ्याक्सीन।
Trial stage: Phase III
2. Sinopharm: चीन
3. Moderna: अमरीकाको नेशनल इन्स्टीट्यूट अफ हेल्थ
Trial stage: Phase II
4. CanSino: चीनको बेइजिङ इन्स्टीट्यूट अफ बायोटेक्नोलोजी (एकेडमी अफ मिलिट्री मेडिकल साइन्सेज)
5. Novavax: अमेरिका
Trial stage: Phase I/II
6. Pfizer: अमेरिका र जर्मनी
7. Sinovac: चीन
8. Imperial College London: यूनाइटेड किंगडम
9. Inovio: अमेरिका
Trial stage: Phase I
10. IMBC AMS: चीन
11. Genexine Consortium: दक्षिण कोरिया
12. Gamaleya Research Institute: रूस
13. Clover Biopharmaceuticals: चीन
14. Anhui Zhifei Longcom: चीन
15. CureVac: जर्मनी
16. PLAAMS/Walvax: चीन
17. Vaxine: अष्ट्रेलिया
Prevइन्स्टाग्राममा सलमान, आलिया, सोनाक्षी र करणका फलोअर तीव्र गतिमा घट्दै, जान्नुस् कसको कति घटे?
Nextमकैंका फाइदै फाइदा, छालादेखि आखाँसम्मलाई उपयोगी
‘एक था टाइगर’ मा पहिलो रोजाईमा थिए शाहरुख, यसकारण छोडेका थिए फिल्म
एक पछी अ,र्को खु,सिको खबर : भा,रत नेपाल सि,माना मा अब ड्रो,नले गर्नेछ निग,रानी
६० बर्षीय बृद्ध फुपाजुको यस्तो घिनलाग्दो ह’रकत ! १७ बर्षीय भदैनी को पेटमा ५ महिनाको बच्चा-भिडियो हेर्नुहोस
धनियाँको यो चमात्कारिक फाईदा जानीराखौं
भारतबाट सलह नेपाल छिर्दै, अब अर्को भयावह चुनौती थपिने ! (6223)
देशभर कोरोनाले आतंकमच्चाईरहेका बेला भक्तपुरमा घट्यो अनौठो घटना, स्थानीयवासी परे अचम्म, मच्चियो हल्लीखल्ली ! (5044)
रुकुम घटनामा वडाध्यक्षको गल्ती छैन’ भन्दै जनार्दन शर्माले बोल्न थालेपछि संसदमा होहल्ला (3830)
बुटवलमा जब गर्भवती महिलालाई अप्रेसन गर्नु अघि चिकित्सकले कारोना भएको थाहा पाएपछि…डाक्टरले जे गरे त्यसले बनायो सबैलाई चकित (3224)
काठमाण्डौका यी ठाउँहरुमा कोरोना संक्रमित भेटीएपछि सिल ! (2767)
देशैभरिका घरबेटीका लागि गृह मन्त्रालयले जारि गर्यो सूचना, यदि यस्तो गरेको पाइए हदैसम्मको सजाय हुने ! (2712)
विद्यालय खोल्ने तयारी, मिति नै तोकियो (2672)
१८ साताकी गर्भवती महिलाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएपछि, जङ्गलमा लगेर यसरि गरियो दाहसंस्कार (2645)
भोलि साउन १८ गतेदेखि २२ गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय, सवारी साधन पूर्णरुपमा बन्द (2605)
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबिरुद्धको भ्याक्सीन पनि सबै भन्दा पहिले चीनले नै दिने ! (2358)